Njani ukufumana free Isitshayina umbhalo inombolo yefowuni - Ividiyo Dating
Njani ukufumana free Isitshayina umbhalo inombolo yefowuni – Ividiyo Dating
Ndinguye kulinywa nzulu kwimidlalo telecom icandelo, kwaye ngenene, senza nokubonelela wobulali DIDs kuba engenayo kwaye ephumayo traffics. Kukho kanjalo eziliqela zephondo nokubonelela enye efanayo inkonzo, kodwa kukho ngokuqinisekileyo ngenyanga tyala kuba oko. Ngabo ranging ukusuka dollazi.
USD. kuyigcina imiyalelo yam yoqobo Isitshayina cellphone inkonzo kuba ubuncinane qho ngenyanga imali, umnxeba wam service provider ukuqala ngamazwe elide-umgama inkonzo (kufuneka urob deposited), kwaye azise Isitshayina sim card kunye nam ukuba Ekhanada.
Ukufumana uluhlu lwamagama
zifumaneka simahla, kodwa mna kufuneka ahlawule urob ngenyanga ukugcina wam Isitshayina inombolo yefowuni aphile. Mna ubuqu sebenzisa WeChat kunye wam eyandisiweyo usapho China, ngokunjalo wam Isitshayina umfazi nabahlobo apha kwi-States njengokuba kubhaliwe iindleko nto ukuba unayo i-data sicwangciso. Layo s elikhulu APP, ifana ne-Skype, kodwa wena musa t kufuneka unayo nayiphi na idiphozithi zabo bank, kwaye kulula ukuyisebenzisa ividiyo incoko kwaye thumela amaxwebhu. Sonke osetyenziselwa sebenzisa i-Skype kodwa zifunyenweyo WeChat ngakumbi convenient. Wena musa kufuneka Isitshayina inombolo yefowuni ukusebenzisa i-APP. Iselula yakho inani, naphina apho ehlabathini kuwe neplanethi abahlala kuyo, kwanele. Mna bayilibala ukuba umzekelo-icatshulwe ukuba unayo i-iPhone okanye, nje ngesingesi, unga sebenzisa intetho kokubhaliweyo. Ngokulula tshintsha yakho igalelo kwi-Isitshayina kwaye nqakraza isandisi-sandi iqhosha kwaye athethe. Nje qiniseka ukuba ufuna ukuthetha kancinane chu kwaye enunciate. Kubalulekile ayisasebenzi kuyimfuneko ukuba uhlobo Pinyin okanye sebenzisa i-handwriting indlela. Ngowe Isixhosa mna fumana le kakhulu kwaye kuyakhawuleza lula indlela ukuthumela umbhalo, kwaye ndiya kuba kanjalo kusetyenziswa intetho igalelo ngempumelelo inani lamaxesha. Kwi-nye esandleni sakho, ngoko ke abaninzi websites ndayamkela ifowuni inani ukuba ivela kwelinye ilizwe, ezifana WeChat, njalo njalo. Ungajonga ngaphandle indlela ukuba ndithi. Kwelinye isandla sakho, ukuba uyakwazi kwenzeka China okanye unesigulo Isitshayina umhlobo. Uyakwazi bambiza ngokuba uncedo kuwe, ngenxa, China, uyakwazi ukuthenga ifowuni amakhadi kuzo zonke, nkqu wena musa t kuba Isitshayina ID ikhadi. Awukwazi bhalisa Isitshayina umnxeba i-intanethi ngenxa Isitshayina urhulumente isicelo omtsha yefowuni inombolo yobhaliso kwi-umntu, apho lijolise curb unxibelelwano ubuqhetseba. (waqala ukusuka) Wam lonikezelo ngu ukufumana ezinye bhalisa iindlela, okanye ukuboleka ukusuka umntu othe gotten a Isitshayina inani(wam guess kubalulekile rare meko kwi-America) Wam personal amava ukuba ufake overseas inguqulelo(njenge WeChat kusenokuba ebhalisiweyo kunye overseas inani kodwa awunokwazi sebenzisa iinkonzo zemali kuyo, ezifana red pocket kwaye Engagqibekangacomment) okanye ngokulula wasinikela phezulu(ezinye mobile imidlalo). Mhlawumbi musa t kufuneka omnye. Ukuba ufuna kumelana kwi-Isitshayina websites, idla kukho amaxwebhu ungene. Omnye Usebenzisa ifowuni yakho inani. Kodwa kukho enye ekunokukhethwa: Usebenzisa ye-imeyile yakho. Ndiyacinga ukuba awuzange t bona ukhetho lwe email. Kwaye unako kanjalo elithile kunye nezinye ethandwa kakhulu loluntu ii-akhawunti. Ezifana QQ, WeChat kwaye Sine microblog. Layo s iluncedo kakhulu ngenxa yokuba le ndlela isebenza kuzo phantse websites kwi-China. I-trick kukuba, leverages kwi prevailing e-engagqibekangacomment isisombululo, ezifana i-paypal, Uzella(KUTHI iibhanki), WeChat Ahlawule kwaye Alipay. Kuba esiqhelekileyo imali changers kwaye iibhanki, baya ukugcina imali echibini nganye okwangoku. Ndithi a umthengi ufuna ukutshintsha USD kwi-CNY, bank imali changer kuthatha NATHI senze. Indlela unako ndifumana a Isitshayina inombolo yefowuni ukuze ndibe unako ukufumana wagqitywa kwaye kusenokwenzeka unxulumano ezivela kwezinye Isitshayina phones ngexesha ngaphakathi USA ? Indlela unako ndifumana a Isitshayina inombolo yefowuni ukuze ndibe unako ukufumana wagqitywa kwaye kusenokwenzeka unxulumano ezivela kwezinye Isitshayina phones ngexesha ngaphakathi U. S
← Benched - Eyona enye ka-Ividiyo Dating kwaye Chatroulette
Dating girls kwi-china - Ividiyo Ukukhangela Injini e Ukukhangela →